ပြောင်း စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (SGD) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (SGD)
ပွောငျး စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (SGD)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ (SGD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: စင်္ကာပူ. စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: တေးသီချင်းဆို.
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.753စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ယူရိုEUR€0.625စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.542စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.689စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.27စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.65စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč16.15စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.85စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.942စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.972စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$15.02စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$5.84စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$4.19စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹56.51စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.115.41
စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.05စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿23.61စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.89စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥81.35စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩841.14စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦287.12စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽57.39စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴21.09
စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ BitcoinBTC0.00001 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ EthereumETH0.000375 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ LitecoinLTC0.00338 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ DigitalCashDASH0.00291 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ MoneroXMR0.00285 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ NxtNXT12.37 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ Ethereum ClassicETC0.0391 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ DogecoinDOGE12.52 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ZCashZEC0.00435 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ BitsharesBTS6.55 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ DigiByteDGB9.41 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ RippleXRP0.804 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ BitcoinDarkBTCD2490688.28 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ PeerCoinPPC0.771 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ CraigsCoinCRAIG32929914139.65 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ BitstakeXBS0.303 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ PayCoinXPY301.24 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ ProsperCoinPRC75309144.04 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ YbCoinYBC0.000418 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ DarkKushDANK23172902542.72 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ GiveCoinGIVE156417092163.33 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ KoboCoinKOBO58 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ DarkTokenDT0.694 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGD သို့ CETUS CoinCETI10427806144.22
1 XP to SPA2021-04-22 10:59:20
1000 DOGE to THB2021-04-22 10:58:59
1 SPA to XP2021-04-22 10:58:09
200 USD to THB2021-04-22 10:56:59
500 XP to SPA2021-04-22 10:55:35
500 SPA to XP2021-04-22 10:55:12
1 USC to THB2021-04-22 10:55:03
10 SPA to XP2021-04-22 10:54:30
3000000 USD to GBP2021-04-22 10:53:58
1 EUR to NGN2021-04-22 10:53:30
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 11:00:02 +0000.